Posted by ကို Tranquillus | ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2021 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
မည်သည့်ခေတ်ပင်ရှိပါစေ၊ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောကမ္ဘာတွင်စွမ်းဆောင်ရည်သည်အမြဲတမ်းရှာဖွေနေသောအရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အလုပ်တွင်စာအရေးအသား (utilitarian ရေးသားခြင်းဟုလည်းခေါ်သည်) နှင့် ပတ်သက်၍ ဤအရည်အသွေးသည်မဖြစ်စလောက်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ အမှန်မှာ၎င်းသည်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည် - လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာ၊ စာများ၊ မှတ်စုများ၊ အစီရင်ခံစာများ ...
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အကြိမ်များစွာတောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ ငါသူတို့အများစုအတွက်သူတို့၏လေ့လာမှုအဆင့်နှင့်မကိုက်ညီသောအရေးအသားများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နယ်ပယ်နှင့်ပင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဥပမာဒီဝါကျကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။
« ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များတွင်လက်ကိုင်ဖုန်းတိုးပွားလာနေသောနေရာကိုကြည့်။ တယ်လီဖုန်းလုပ်ငန်းသည်လာမည့်နှစ်ပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သေချာသည်။. »
ဤတူညီသောဝါကျကိုပိုမိုရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ရေးသားနိုင်ပြီး ပို၍ ထိရောက်သည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည် -
« ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၌မိုဘိုင်းဖုန်း၏ကြီးထွားလာနေသည့်နေရာသည်တယ်လီဖုန်းကဏ္aဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကသေချာစေသည်။ »
ပထမ ဦး စွာ "in of of" ဟူသောအသုံးအနှုန်း၏ဖျက်ခြင်းကိုသတိပြုပါ။ ဤအသုံးအနှုနျးအသုံးပွုခကျြသညျစာလုံးပေါင်းအမှားအယွင်းမဖြစ်သော်လည်းဝါကျကိုနားလည်ရန်အသုံးမဝင်ပါ။ အမှန်မှာဤအသုံးအနှုန်းသည်ဤဝါကျတွင်များစွာရှိ၏။ ပိုမိုအသုံးများသောစကားလုံးများကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဤဝါကျသည်စာဖတ်သူအားသတင်းစကား၏အခြေအနေကိုပိုမိုနားလည်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ထို့နောက်၊ ထိုဝါကျတွင်ပါသောစကားလုံးအရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးခြားနားချက် 07 ခုကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ အမှန်မှာကန ဦး ဝါကျအတွက်စကားလုံး ၂၇ လုံးနှင့်ပြန်လည်ရေးသားထားသောဝါကျအတွက်စကားလုံး ၂၀ ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဝါကျတွင်ပျမ်းမျှစာလုံး ၂၀ ပါသင့်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဟန်ချက်ညီစေရန်စာပိုဒ်တစ်ခုတည်းတွင်ဝါကျတိုများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည့်အကောင်းဆုံးစကားလုံးများ။ ဝါကျအရှည်ကိုစာပိုဒ်တစ်ခု၏ပိုရှည်စွာပြောင်းရန်ပိုမိုတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်သည်။ သို့သော်စာလုံး ၃၅ လုံးထက်ပိုသောစာကြောင်းများသည်စာဖတ်ခြင်းနှင့်နားလည်မှုလွယ်ကူခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်အရှည်ကန့်သတ်ချက်ရှိကြောင်းသက်သေပြသည်။ ဤစည်းမျဉ်းသည်လူတစ် ဦး ဖြစ်စေ၊ ပညာရှင်ဖြစ်စေလူတိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်း၏ချိုးဖောက်မှုသည်လူ့ ဦး နှောက်၏မှတ်ဥာဏ်တိုတောင်းမှုကိုတားဆီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်“ နှစ်ပေါင်းများစွာ” အစားထိုးခြင်းကို“ ရှည်လျားသော” ဟူ၍လည်း မှတ်သားပါ။ ဒီရွေးချယ်မှုအဓိကအား၏လေ့လာမှုများကိုရည်ညွှန်းသည် Rudolf Flesch စာဖတ်ခြင်းတွင်ပိုမိုထိရောက်စေရန်အတွက်တိုတောင်းသောစကားလုံးများအသုံးပြုခြင်း၏အရေးကြီးမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သောဖတ်ရှုနိုင်မှုအကြောင်း။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အဆင့်၏ပြောင်းလဲမှုကို passive voice မှ active voice သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒီဝါကျကိုပိုပြီးနားလည်နိုင်တယ်။ အမှန်မှာဤဝါကျတွင်အဆိုပြုထားသောဖွဲ့စည်းပုံသည်တယ်လီဖုန်းများ၏ကြီးထွားလာသောအခန်းကဏ္ and နှင့်တယ်လီဖုန်းစျေးကွက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အကြားတည်ရှိမှုကိုပိုမိုတိကျပြတ်သားစွာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည်။ စာဖတ်သူကိုဘာသာရပ်နားလည်ရန်အကြောင်းရင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု link တစ်ခု။
နောက်ဆုံးတွင်စာသားရေးခြင်းသည်လက်ခံသူအားအဆုံးတိုင်အောင်ဖတ်ရန်၊ မေးခွန်းမလိုဘဲနားလည်ရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သင့်ရဲ့အရေးအသား၏ထိရောက်မှုကိုတည်ရှိသည်ဘယ်မှာဒီဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းစွာရေးသားခြင်းအားဖြင့်ထိရောက်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်! ဖေဖော်ဝါရီလ 8, 2021Tranquillus
လွန်ခဲ့သောအကွာအဝေးများ၊ မျက်နှာဖုံးများ၊ အစားအသောက်များ၊ Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပြောင်းလဲမှုအသစ်များ
အောက်ပါလစာခံစားခွင့်များကိုစုစည်းထားသည့်စုပေါင်းသဘောတူညီချက်သည်စာချုပ်မချုပ်မီထုတ်ပယ်ခံရသော ၀ န်ထမ်းအားနောက်ကြောင်းပြန်လျှောက်ထားပါသလား။